Macallin ka tirsan Jaamacadda SIMAD oo ku dhaawacmay qarax loogu xiray gaarigiisa – Radio Muqdisho
Macallin ka tirsan Jaamacadda SIMAD oo ku dhaawacmay qarax loogu xiray gaarigiisa
Macallin ka tirsan Jaamacadda SIMAD oo ka mid ah Jaamacadaha ku yaalla Muqdisho ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhashay bambo loogu xiray gaarigiisa oo marayay agagaarka Xaafadda Taleex degmada Hodan ee Gobolka Banaadir.
Macallinka oo magaciisa lau sheegay Cabdixaliim ayaa la tilmaamay in mid ka mid ah lugihiisa uu ku waayay qaraxa, waxaana iminka lagu dabiibayaa cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho.
Ciidanka hay’adda nabad-sugidda oo gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa halkaasi ka billaabay baaritaanno ku aadan cidda falkaasi ka dambeysa.
Taliyaha ciidanka booliska ee Degmada Hodan Maxamed Daahir Cabdulle oo la hadlay warbaahinta ayaa ku eedeeyay kooxda Al-Shabaab inay ka dambeyso falka qaraxa, waxaana uu intaas raaciyay inay ku raadjoogaan dadkii falka ka dambeeyay.
Dabayaaqada sanadkii tegay ayay ahayd markii macallin kale, oo ka tirsanaa maamulka sare ee Jaamacadda SIMAD laguna magacaabi jiray Ibraahim Maxamed Xaamud lagu dilay weerar ay fuliyeen rag hubeysan oo watay gaari, kuwaas oo goobta ka baxsaday markii ay dilka geysteen.
Olole Nadaafadeed oo ka bilowday qaar ka mid ah waddooyinka Muqdisho
Ciidamada Xooga Dalka oo Gobolka Bakool Howlgal ay ka sameeyeen ku dilay Tiro Argagixiso ah